musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Emirates Inotangisa Nyowani Dubai kuMiami Ndege
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Emirates Airline inobatanidza nzvimbo mbiri dzekuzorora uye dzebhizinesi nenzvimbo yekutanga yekumira.
Emirates 'sevhisi nyowani kuMiami inopa yekuwedzera nzvimbo yekuwana nekubva kuFlorida.
Nzira nyowani inowedzera Emirates 'US network kuenda kunzvimbo gumi nembiri pane dzinopfuura makumi manomwe vhiki nendege.
Basa idzva rinobatanidza vafambi vanobva kuMiami, Southern Florida, South America neCaribbean kuenda kunzvimbo dzinopfuura makumi mashanu kuyambuka Middle East, West Asia, Africa, Far East uye Indian Ocean Islands kuburikidza neDubai.
Emirates iri kubatanidza bhizinesi repasirese uye vafambi vezororo neyekutanga-kese yevatakuri sevhisi pakati Dubai uye Miami. Iyo yendege yakapemberera kuvhurwa kwayo nyowani kanokwana kana-pa-svondo sevhisi nhasi, apo yekutanga ndege yakazosvika mukati Miami na11: 00 AM nguva yemuno.
EmirateKubhururuka EK213 kwakatambirwa neMiami International Airport pamwe nekusaruta kanoni yemvura ndokukwevera vateereri vevatakuri, vateveri veaviation uye vashanyi kuzopemberera. Kwendege yekutanga, iyo nendege yakashanda Boeing 777 Game Changer, iine yakakura, yekupedzisira-yazvino Kirasi Yekutanga masutu epasirese ane dhizaini akafuridzirwa neMercedes-Benz S-Kirasi.
Pamwe pamwe nebasa rayo razvino kuOrlando, Emirates 'sevhisi nyowani kuMiami inopa yekuwedzera nzvimbo yekuwana uye kubva kuFlorida uye kuwedzera Emirates' US network kunzvimbo gumi nembiri pane dzinopfuura makumi manomwe pasvondo nendege, ichipa vafambi sarudzo zhinji uye nyore kubatana kubva kuEmirates network kuenda Maodzanyemba Florida. Inobatanidzawo vafambi vanobva kuMiami, Southern Florida, South America neCaribbean kuenda kunzvimbo dzinopfuura makumi mashanu kuyambuka Middle East, West Asia, Africa, Far East uye Indian Ocean Islands kuburikidza neDubai.
Essa Sulaiman Ahmed, Mutevedzeri weMutungamiri weDunhu, USA neCanada vakati: “Tinofara kutanga basa ratakatarisira kwenguva refu pakati peDubai neMiami kune vafambi. "Tinotarisira kuti sevhisi iyi ichafarirwa nevatengi vedu vari kutsvaga zviitiko zvitsva sezvo nyika dzakaita seUAE neUS dzichifambisira mberi nhomba dzavo uye nyika ichizarukira kufamba kwenyika."
"Nekuwana mukana wakakura unopihwa nebasa idzva reMiami, tinotarisira kuti riunze kudiwa kukuru, kusimudzira bhizinesi, kufamba nemigwagwa yezororo uye kuumba hukama hwakawanda hwehupfumi nekushanya pakati pemaguta maviri nekupfuura. Isu takazvipira kuwedzera mashandiro edu muUS zvinoenderana nekuwedzera kudiwa kwekufamba nendege uye tinoda kutenda zviremera nevatinoshanda navo kuMiami nerutsigiro rwavo. "Tinotarisira kupa yedu yakasarudzika chigadzirwa uye mubairo-unohwina sevhisi kune vafambi."